Ireo fitenim-paritra, patois: ahoana tsara hoe no filaza azy ? · Global Voices teny Malagasy
Fanalahidy vitsivitsy hijerena ny làlan-kombàna ao anatina famaritana iray maroloko
Voadika ny 16 Aogositra 2021 6:19 GMT
Sarintany maneho ireo fiteny ampiasaina ao Frantsa, ahitàna ambangovangony ireo faritra ara-jeôgrafika misy azy ireny. Pikantsary nalaina tao amin'ny Lexilogos.com, nahazoana alàlana tamin'ny mpanoratra ary nokirain'ny mpampiasa Wikipedia Hellotheworld, nampiasàna ny lisansa CC-BY-SA 3.0.
Raha vao resaka fiteny, ary indrindra indrindra fa ireo teny vitsy mpampiasa, matetika ny vokabolary ampiasaina dia miteraka resabe noho ny fitongilanana ara-politika sy ny fifandanjàn-kery eny anivon'ireo vondrom-piarahamonin'ny fiteny. Ao Frantsa, ireo vondrom-piarahamonina sasantsasany dia manana taonjato roa ao an-damosiny nanaovany tolona mba hahazoana ireo kazarana endrika fankatoavana misy, isan'ireny ny fanondroana ny “fiteny” tsy ho “tenim-paritra” na “patois”, fomba filaza izay mbola misy hatramin'izao ao anatin'ny vokabolary mahazatra, saingy mifono hevitra manetry.
Heverin'i Frantsa fa ny teny frantsay no fitenim-pirenena sy ôfisialy. Kanefa, be pitsony ny tena zavamisy ara-piteny satria misy fiteny miisa 75, izay lazaina fa fitenim-paritra araka ny fomba fanondro ôfisialy ao amin'ilay firenena, isan'ireny ireo roapolo manerana ny faritry ny tanibe frantsay (araka izany ny ankamaroan'ireny fiteny ireny dia ampiasaina any amin'ireo departemanta sy ireo faritra any an-dranomasina).
Azontsika raisina ho ohatra ny “gallo”, fiteny rômana ao Bretagne, any avaratra-andrefan'ny firenena, izay tombanana ho manana mpiteny miisa 200 000 any ho any araka ny fanadihadiana iray ara-tsôsialy sy ara-piteny natao tamin'ny 2018. Niharam-pahavoazana noho ny hevitra raikitampisaka hoe fiovan'endriky ny fiteny frantsay izy io ary noheverina ho toy ny sampana iray tsy dia misy lanjany, amin'izao fotoana izao ny “gallo” dia ampianarina any amin'ireo sekolim-panjakana ary azo aroso ho taranja hiadinana amin'ny bakalaoreà. Miaraka amin'ny fiteny “breton”, tamin'ny 2004 dia neken'ny Filankevi-paritra izy ho toy ny ampahany amin'ireo « fiteny ao Bretagne, milahatra amin'ny fiteny frantsay ».
Momba ny toerana misy ireo fiteny ao Frantsa dia ampiasain'ny antontan-kevitry ny Global Voices ny fomba fanondro hoe « fitenim-paritra », araka ny fampiasa mahazatra amin'izao fotoana izao. Hitantsika koa, ohatra, io fomba fanondro io any anatin'ireo andinin-dalàna mifandraika amin'ny fiarovana ny harem-bakok'ireo fitenim-paritra sy ho fampiroboroboana azy ireny (lalàna Molac), any anatin'ireo media na ihany koa any anatin'ireo kabary ataon'ireo olona mirotsaka amin'ny fiarovana sy ny fampivoarana ireny fiteny ireny, toy ny an'ilay vondrona « Mba ho velona ny fitenintsika ».
Famaritana mifono hevitra tena ambadika tafahoatra
Ny “Délégation générale à la langue française et aux langues de France“, antokon-draharaha napetraka handrindra ny pôlitikan'ny fiteny manerana ny firenena, dia manolotra famaritana iray ho an'ireo fitenim-paritra ao Frantsa « hoe ny fiteny tenenina any amin'ny ampahany amin'ny faritry ny firenena nandritra ny fotoana elabe noho ilay frantsay teny iraisana », mipetraka araka izany ao anaty fomba fijery iray ara-tantara izay manome vahana ny fahelàna velona sy ny fisian'ny fiteny iray ho mason-tsivana amin'ny fametrahana ho ara-drariny, no sady manome toerana goavana ny fiteny frantsay ho toy ny fiteny fitaratra.
Vanimpotoanan'ny fampiraisana ara-piteny ny taonjato faha-18, niaraka tamin'ny fahavononana be nananan'ireo manampahefana mba « hamotika ny “patois” » izay toa sakana ho amin'ny firosoan'ny firenena. Niseho vatana io tetikasa famongorana io tany amin'ny faran'ny taonjato faha-19, teo ambany fitarihan'ny minisitra Jules Ferry, izay nametraka ny fampianarana ho tsy maintsy arahana ary nandrara ny fampiasàna tany an-tsekoly ireo fiteny hafa ankoatra ny fiteny frantsay, raha tsy izany dia iharan'ny sazy. Ny gazety Le Messager dia mamoaka io fananingàna io, mitondra ny datin'andro 24 Septambra 1840 :
Poteho, raha azonareo atao, ireo “patois” tsy misy ilàna azy ao Limousins, Périgourdins sy Auvergnats, tereo amin'ny fomba rehetra azonareo atao mba hanaiky ny maha-tokana ny fiteny frantsay toy ny maha-tokana ny mari-pandanjàna sy fandrefesana, hanohana anareo amin'ny fo tokoa izahay, ary asa soa no hataonareo ho an'ireny olondia ireny sy ireo ambiny eto Frantsa tsy mbola nahavita velively nanakatra azy ireny.
Tamin'ny fandraisana kihon-dàlana somary menamenatra tao anatin'ireo pôlitika tena tamim-pitandremana fatratra tany aloha nanoloana ny fahamaroam-piteny izay noraisina ho toy ny loza mitatao ho an'ny firaisam-pirenena, ny lalàna Deixonne tamin'ny 1951 « mifandraika amin'ny fampianarana ireo tenimpirenena sy fitenim-paritra ao an-toerana » dia toa niresaka fotsiny ny fiteny basque, catalan ary occitan. Marihan'ilay lalàna ny amin'ny « fiteny eo an-toerana » sy ny fampitàna ny « fombafomba, ny literatiora ary ireo taokanto malaza ». Nanomboka teo dia nofafàna tao anatin'ny vokabolary ôfisialy ny fomba filaza hoe « fitenim-paritra ».
Henriette Walter, manampahaizana momba ny fiteny, dia mamaritra ireo fiteny any amin'ny faritra ho toy ny « fiteny maro fiaviana (latina, avy amin'ny fiteny alemàna, selta (celtique) na koa tsy fanta-piaviana, toy ny basque), saingy ara-tantara dia hita tsy nitsahatra teo amin'ny faritry ny tany frantsay, sy tany amin'ireo toerana jeôgrafika voafaritra tsara », famaritana faritàny izay nanilihana indrindra indrindra ny romani sy ny yiddish.
Raha arovan'ilay ramatoa mpikaroka ihany koa ny fampiasàna ny fomba fanondro hoe « patois » mba hamaritana ny fiteny iray ampiasaina ao anaty faritra jeôgrafika tery dia tery, ary iarahany manaiky ny filazana fa ho an'ireo mpahay momba ny fiteny, ny patois dia fiteny iray, dia lasa vitsy mpampiasa io eny anivon'ny vondrompiarahamonin'ireo siantifika.
Ny hevitry ny teny dia mamerina antsika, araka ny tenin'i John Orr, ho any amin'ny matoanteny patoier tao anatin'ny fiteny frantsay tranainy, izay nidika «manifikifika tànana, manao fihetsika mipelipelika (mba ho takatry ny hafa, toy ny an'ireo moana-marenina)», avy eo «mitondra tena, miketrika». Fikisahana ara-kevitra iray no nitondra ny hevitry ny teny hoe “patois” hiala avy amin'ny hoe fanaovana fihetsika mipelipelika ho amin'ny hoe fitondrantena, avy eo fitondrantena tsy mendrika, talohan'ny nampiasàna azy hanondroana “fiteny iray manokana (oh: ny fikodediky ny ankizy, ny ngonongonon'ny vorona, fiteny iray henjana sy mivatravatra)». Ny famaritana atolotry ny Encyclopédie de Diderot et d'Alembert dia miverina mandray ny fifanoheran'ny fiteny/patois, amin'ny fanohanana ny hevitra mahamadio miavaka ny fiteny frantsay : « Patois. Fiteny maloto voapentipentina araka ny fomba fiteny azy saika any amin'ireo faritany rehetra mihitsy : samy manana ny patois-ny io […]. Ao amin'ny renivohitra ihany ilay fiteny no ampiasaina. »
Araka izany, ny hoe « patois » ao Frantsa dia rakotra fonofonon-kevitra miiba / manambany, voatanisan'i Jean-Pierre Cavaillé ao anaty lahatsoratra iray anaty bilaogy. Avoitrany ao ny fahasarotan'io fomba filaza io, amin'ny fanehoana fa indraindray ny hoe « patois » dia mety koa ho lasibatry ny fampihenan-danja sy fihetsehampo feno fireharehana ho an'ireo lahy sy vavy mpiteny azy :
Mazava ho azy, lazaiko azy ireo izay heveriko momba ireo hevitra araikitra amin'ilay teny hoe “patois” : hoe zana-teny izy io na fiteny frantsay maloto / voapentina ; hoe misy (nisy) patois betsaka afaka mifanisa amin'ireo vohitra ; hoe fantatra saingy tsy vita ianarana, tsy vita soratana, tsy mitovy amin'ny occitan ; malaka izy ireo na hanaraka ahy na tsia.
Ireo singa miiba ampifamatorina amin'ny hoe “patois” dia azo amarinina betsaka amin'ireo mifandraika amin'ny “fitenim-paritra” araka ny fiteny mahazatra. Amin'ny fandalinana ny fiteny, ny fitenim-paritra dia tsy inona fa karazana avy amin'ny fiteny iray (sampan-teny), tsy misy filaharam-pahamboniana voapetraka. Be pitsony anefa io fihevitra io fa tsy araka ny fahitàna azy, toy ny hazavain'ilay YouTubeur Linguisticae ao anatin'ity lahatsary fanazavàna ity :
Kanefa, ao anatin'ny fampiasàna azy mahazatra, ny « fitenim-paritra » dia mivoy ny sary maha-zana-teny, ampifandraisina amin'ny fivakivakisana lazaina fa ambany kokoa raha alahatra amin'ny fametrahana fenitra matanjaka kokoa ho an'ny fiteny iray mibahan-toerana, toy ny fiteny frantsay, ary amin'ny famaritana faritra, fiarahamonina, hatramin'ny fatram-pahaizana mihitsy aza. Araka izany, ilay lazaina fa tsy fisian'ny literatiora voasoratra, raha ny tranga manjo ny patois sy ireo fitenim-paritra no raisina, na vitsy kokoa aza, dia nofidiana ho masontsivana fanambaniàna.
Toetra iray mampiavaka ny tontolon'ny fiteny frantsay ny fifikirana mafy amin'ny fiteny frantsay, izay noterena hanjaka nanerana ny faritry ny firenena tamin'ny alàlan'ny pôlitika fampandraisana anjara an-tsitrapo mba ho fampiraisam-pirenena, indrindra fa tamin'ny alàlan'ilay tsy maintsy ampianarana ny fiteny frantsay tany an-tsekoly. Ankehitriny dia ny « fitenin'ny Repoblika » (andininy faha 2 ao anaty Lalàm-panorenana, nahitsy tamin'ny 1992) no iresahana betsaka indrindra sy mibahan-toerana. Amin'io lafiny io, fiteny vitsy an'isa no iantsoana ireo fiteny lazaina hoe avy “any amin'ny faritra”, raha ny isan'ireo mpiteny no jerena, ary vao mainka aza atao izay haha-vitsy azy noho ny fanilikilihana ara-tantara natao azy ireny.